The Swedish ichekwa ego na bank usoro | Apg29
The Swedish ichekwa ego na bank usoro
Part atọ nke akwụkwọ bụ cashless izu ọjọọ site Cash naanị.
The Riksbank na-arụ ọrụ mgbe niile, n'agbanyeghị na ya na a sịrị na "na-anọpụ iche" nke belata ojiji nke ego. Riksbank ebipụta kwa afọ a akụkọ a na-akpọ "The Swedish Financial Market". Ọ na-agụnye ọnụ ọgụgụ na ịkwụ ụgwọ. E i nwere ike ịgụ mgbakọ na mwepụ nkọwa ndị dị otú ahụ dị ka otú ọtụtụ ATMs na kaadị ọnụ na e nwere na Sweden.
The onwe mmiri na-adịkwaghị na nnukwu anọ. Nordea, Swedbank, SEB na Handelsbanken. Banks nwere dị iche iche digital ego na a na-eji naanị n'ime ụlọ akụ onwe ya. Banks nwekwara ruo n'ókè ụfọdụ onye ọ bụla ọzọ na-ejide onye ọ bụla ọzọ ala nke nwere ike Žb a dị ize ndụ domino utịp ego ọdụdọ. Ọ aghọwo ihe maka ndị ọzọ eme ihe nkiri ndị dị otú ahụ dị ka ụlọ ọrụ ịnshọransị na nnukwu retail n'agbụ enwetara ọnọdụ nke a akụ. Mba, Sweden na jikọọ na ichekwa ego na bank ụkpụrụ akpọ Basel III. Nke a ọkọlọtọ na-achọ na-anoghi n'ulo oba 'ego kwụsie ike. N'èzí a isi usoro e nwere abụọ "n'ígwé" na-akpọ EBIONITISM m na EBIONITISM II, nke n'ụzọ mejupụtara ụgwọ. Nke a bụ nnọọ cryptic, ma ọ bụ mma ịmara na okwu maka ndị pụrụ mesịrị chọrọ emikpu onwe ọzọ na ichekwa ego na bank usoro.
The Riksbank na General Council mgbe nwere nso agbatị na nzuko omeiwu. The Riksbank nwekwara Executive Board. Na 1600s, Sweden nwere a onwe akụ. Riksbank okosobode n'usọ mgbe odida zụrụ steeti. Riksbank ada udi n'oge kemmefu regency tupu Karl XIs eze. N'oge anyị a, mmiri maka na nrigbu na Riksbank-eme nlekọta nke dum Swedish bi site egbochi dị ukwuu dị ka o kwere site na iji ego.
The Riksbank bụ mgbe a nanị na-esite banknotes. Ná mmalite 90s malitere gbasara ego obodo iwu-elekwasị anya na onu oriri kama ọnụego mgbanwe. The ego Riksbank ejisie rinns naanị na Riksbank. The Riksbank isi ngwá ọrụ na-achịkwa mmasị ọnụego bụ ịgbanwe repo ọnụego ya na ndị ọzọ bịara n'ikperé mmiri ga-Olileanya na-eso. The ọnọdụ ego nwere ike ịbụ ya mere iju na repo ọnụego bụ na-ezighị ezi. Mgbe nke a mere na anoghi n'ulo oba na-esonụ nwere ike amasị na ha gbara agbata obi Denmark bilie ihe ụba ina ego.
The Riksbank na-arụ ọrụ mgbe niile, n'agbanyeghị na ya na a sịrị na "na-anọpụ iche" nke belata ojiji nke ego. Riksbank ebipụta kwa afọ a akụkọ a na-akpọ "The Swedish Financial Market". Ọ na-agụnye ọnụ ọgụgụ na ịkwụ ụgwọ. E i nwere ike ịgụ mgbakọ na mwepụ nkọwa ndị dị otú ahụ dị ka otú ọtụtụ ATMs na kaadị ọnụ na e nwere na Sweden. The Bank nwekwara bipụtara ọzọ akụkọ na ịkwụ ụgwọ a na-akpọ "The Swedish retail ịkwụ ụgwọ ahịa."
A ukwuu nke ndị Swedish ichekwa ego na bank usoro mejupụtara Rix. The Riksbank si Rix sys-tem ga-eme ka nnukwu ego nwere ike n'etiti niile isi obot. Ọtụtụ ụdị nke ịkwụ ụgwọ na-aga site Rix ma ọ bụ ego, kaadị, kaadị, ala ma ọ bụ ego. A obere cryptic emekarị ike kwuru na Rix "emen ego site ụgwọ na receivables kpebiworo usoro". Ọ nwere ike na--dere bit-emegide Rix ndibiat digital ego. Otu ihe dị mkpa ụdị ego, ezumike nka na-edebe ke Ụgwọ akaụntụ na Riksbank site Rix.
A ole na ole nke Swedish anoghi n'ulo oba na ụfọdụ ndị mba ọzọ nwere ihe ndekọ Rix - usoro. Otu n'ime ihe ndị mba ọzọ kwesiri ngosi Citibank na Morgan Chase. Ụfọdụ mmiri Naa Bank na Ecobank abụghị ka Rix. Banks na-enweghị Rix akaụntụ ka nwere ike iji usoro site zighachi akwụkwọ nnọchiteanya.
Onyenwe Princess Mint, Dragon E Si Nweta Kaadị na Black Knights
Ọ dị mgbe a adaeze aha ya bụ Mint. O we nọdu ihe ele anya na-a nnukwu akụ nke ego na ụdị ego na banknotes. Ma anya na-aghọgbu. Nke nnukwu ikpo, ọ bụ naanị n'elu n'ụdị a ole na ole percent gụnyere ego. N'oge onwunwu elu conned ọtụtụ nde n'aka kaadị. Ke n'etiti ikpo, ọ bụ naanị a nnukwu adabaghi ​​kere ihe ọjọọ anwansi. The adabaghi ​​akpọ digital ego natara tax ikpo anya ọtụtụ ibu karịa ya n'ezie bụ. Around ihu ikpo enuga obere mkpari goblins akpọ bankers. Ka anya dị ka onye na-agbalị na-anapụta a na mkpụrụ ego, ya mere ha hissed ma gosi ya nkọ kapịrị ọnụ ezé. Ọ bụ naanị na bravest onye Ekwuru-anapụta ego.
Ihe ọjọọ dragon na ya kaadị cashless black naiti chọrọ wepụ ya niile ego na igbu adaeze. Dị otú ahụ kites ụgha tax mounds adị n'ọtụtụ mba. Otu mgbe, ndị tax mounds fọrọ nke nta nanị gụnyere ego. Ma mgbe ọjọ wizards si nnukwu dị anya obodo SamUSAmien kere obere dragons, kaadị akwụmụgwọ na ọdịiche na-enyemaka nke nwa anwansi ghọrọ ihe ọ ghọrọ. Wizards awagharị na n'etiti mba niile, na-ebibi tax stacks site ejuputa ha na kaadị akwụmụgwọ na adabaghi. Atọ n'ime ndị kasị njọ wizards bu ụmụnna Mastro, Expresso na Dinero.
Ka anyị na-ịme ụfọdụ ihe ọjọ knight dị ka ha na-anọdụ gburugburu tebụl ekara kaadị na atụmatụ igbu adaeze Mint na-ewepụ ndị ego kpam kpam site na ikpo. Otu n'ime ihe ndị knight aha ya bụ Riksbank. Ọrụ ya bụ iji hụ na ego na-banyere otu ego n'agbanyeghị na tojupụtara na-etolite ma na-amụba.
Ọ na-nnọọ nke ọma mara na mba Finansien. Anyị amaghị ma na-agwa gị ihe ọ bụla ọzọ banyere ya.
Ọzọ naiti aha ya bụ FSA. Ka anya dị ka onye dị nnọọ ukwuu dị ka whispers okwu robberies ebe na oblong mba Finansien ama ọkọkpọhi enye, n'ihi na ọtụtụ ụbọchị, ọ yells pụta n'otu ozi na n'okporo ámá ruo mgbe ọ bụ kpam kpam keolu mgbaka olu.
キ 0 "Anyị ga-ewepụ ego iche nwayọọ nwayọọ!"
Ọzọ naiti nke Finance Association.
キ 1 "ohi!, Ohi!" Yells a uko.
Ọ na-adị mgbe ọ bụla onye steals a otu obere ego ego ebe Finansien.
キ 2 "Ọ bụrụ na anyị na-ewepu ego mmachi akpa, e nwere ihe na-ezu ohi!", Ọ tiri mkpu, sị obi ike.
(Financial nlekọta Authority bụ ihe gị n'ụlọnga n'okpuru Ministry of Finance. Ọ e kere 1991 site na mmakọ nke abụọ ọzọ ụlọ ọrụ. Ya isi ọrụ bụ inyocha na ịchọpụtakwa ala trading na ego ụlọ ọrụ. The FSA nwekwara tasked na "ike ọnọdụ nke na-eji ọkụ na-ahụ na ego ahịa." Ihe niile cashless kpebiri kpamkpam n'isi anyị .)
Di na nwunye ọzọ nke knight myiri propsar na cashless otu N'ogbe Development na Swedish Trade. Ihe mbụ bụ a research ntọala na nke ikpeazụ a azụmahịa nzukọ. Ma Knights kpebiri ihe ga-eme na nke a topsy-turvy akụkọ ya. Ha nanị na-eje ije na na setịpụ mma agha ha na obi nke ndị ogbenye adaeze Mint ọ bụ ezie na o bere ákwá na rịọrọ maka ndụ ya. Ebe ọ bụ na ha groveling na crawling dragon Ebe E Si Nweta kaadị eze mba ahụ dum. The dragon ọkụ niile ego na ya yiri
ume. The Knights ẹmende apụ niile mkpụrụ ego si ikpo na kposara adaeze na ndị na a ọdọ.
Ha maara nke ọma na dragon enweghị nsogbu nwere ike iripịa adaeze okpo otu ugboro. Ma ihe ma ọ bụrụ na o na mberede na mberede ilo a na mkpụrụ ego ma ọ bụ abụọ na ụfọdụ ebe, ma eleghị anya ọ na-dụkọta a ole na ole mkpụrụ ego na uwe dị ka ihe ibé. The dragon bụ n'ezie nnọọ anabata mkpụrụ ego. Ọ bụ ya mere ndị Knights kpebiri kpofuru adaeze n'ime ọdọ kama na-enye ya nri na dragon. The dragon ugbu a ezobe na ya ya nnukwu ikpo nke kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike imebi ya pawing ọ na aja na a nnukwu elu kaadị ka o kpagbuo na ego na ibu ibu. Ọgwụgwụ nke akụkọ.
Site na-ekwu okwu si banyere mwepụ nke ego na iguzogide cashless na Sverge anyị nwere ike ma ọ bụrụ na ọ bụghị na n'ikpeazụ gbochie mgbe ọ dịkarịa ala na-egbu oge akụkọ na-aghọ n'ezie.
Ọ bụrụ na ndị kasị njọ ahụ na-eme, anyị kwere na ọbụna mkpari akụkọ na-akawanye a n'ihu na nke ihe niile na-agwụ ọma.
Gịnị ma ọ bụrụ na ego iche kpamkpam nwayọọ nwayọọ?
About a puku patches na-ewepụ ya ike ghara ịdị nke a dị iche, ma e wezụga n'ihi na ndị na, n'ihi na ihe atụ, ịzụta a ọzọ dị oké ọnụ ụgbọ ala ego. Ma ọ bụrụ na ma 500 na 200 -kronors -sedlarna mwepụ amalite ezigbo nsogbu. Uwe na ihe oriri ka na-arụ ọrụ pụtara nke ọma, ma naanị na okwu nke ahụ n'ezie zụọ. Ma ọ bụrụ na onye aka ekedep skuuta maka 25000 na a narị mkpụrụ ga nwoke na-ere na-agụta 250 banknotes. Ga-200 - kronor banknotes nọ n'ebe ahụ, ọ bụ ka ọ bụghị otú obi ụtọ ka ukwuu gụọ ka 125. Ọ tụfuru ịta mgbe ndị ahịa na-eme iji gwa ya okwu mgbe ọ ka mkpa. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, o nwere ike ekweghị anabata nnukwu ichekwa ego. Ego dị na dị iche iche n'ihi na ọ bụ ihe kasị irè.
Ndị ọchịchị na-ewere ohere ọ bụla na-ata ụta na robberies wepụ ego kama idozi nsogbu na a bara uru n'ụzọ. Ọha na eze na-ege ntị ghara. Otu nnyocha hụrụ, ihe atụ, na nanị pasent 12 na-eche na a puku mkpụrụ ego bụ na-enweghị isi. A afọ ole na ole gara aga na ọ bụ a ukwuu-n'ihu ọha robberies na Jonkoping. Ọ bụ naanị a ụbọchị ole na ole mgbe nke a, tụrụ aro FSA ka a puku patches ga-ewepụ. Ka oge na-mere na ị mgbe ahụ nakwa wepụ patches narị ise na otu narị na mkpado.
Otu nwere ike ise a myirịta dị n'etiti ego na ugbo ala. Ọ ga-abụ dị ka ma ọ bụrụ na na-esi pụọ ụgbọala na-ezu ohi ga-gbochie gwongworo na ụgbọala. Naanị ígwè na mopeds ga-ekwe ka-anọgide na nke ga-ahụ na-ederịta akwụkwọ ozi ahụ obere ego iche. N'eziokwu, ị chọrọ ka ọ mopeds na ịnyịnya ígwè na-akwụsị kwa. Ka anyị kwesịrị ikekwe tinyere ala ọ bụla ahịa ọgwụ n'ihi na ọ na-eme na-ezu ohi ọgwụ ụfọdụ na iji ọgwụ ọjọọ eme? Ka mgbe niile na-ata ụta na robberies iji wepụ ego n'ezie n'ókè nke dị ọcha ihe ụmụaka.
Mgbe 100-krona na obere ego a na-ekpe, ọ bụ ụkpụrụ na-agba ọsọ maka ego na niile. Ahụ na-agbalị na ihe tinyekwa nke ụlọ akụ (ma ọ bụrụ na ị ka nwere ike ịdọrọ ego e) na-arịọ maka 3,000 kronor na 50 - ma ọ bụ 20 iberibe. Ị na-eche na akụ mkpara jikwaa nnọọ oké wads nke ego dị ka a igwe na-agụta elu ma ọ bụ na kasị njọ ọgụgụ 150 ndetu ntuziaka agụta ga-eme ịnọgide na-akụ? O siri ike na 75 iri ise iberibe ma. ATMs dabeere na ndọrọ ego nke na ụka nke banknotes. Ọ bụrụ na otu onye nwere ike theoretically-ekwe na-ana 50 na 20 yitewere ga oké wads nke ego na ígwè ọrụ. Mkpokọta uru nke ego na loaded igwe ga ibelata na olu nke ego ga-abụ nnọọ ibu na-erughị gh maka ego transports.
Ọ nwere ụfọdụ ebe a na amụma nwee nanị mkpụrụ ego ruo 50 kroner uru enweghị ndetu. Nke a ga-amachi n'ofè mgbu fọrọ maka ego ruru site a dịgasị oke. Gịnị ga-eme withdrawals n'ụlọ akụ na vending igwe? Oputara eleghi anya na ọ ga-enwe ike iri mkpụrụ ego na ego igwe mgbe ahụ. Mkpụrụ ego na-apụta ma ọ bụ ma eleghị anya, igwe ndọrọ ego ego nụkwa mkpọtụ dị ka otu agadi oghere igwe ma ọ bụ ihe? Na o siri ike. Ihe bụ nsogbu bụ na unu adịghị eche banyere ya na ụdị aro ma ọ bụ kama na ị naanị ego mwepụ nke anya.
Ọ pụtara nke ọma na ị ga-ịdọrọ ego na ndibiat kama na ịdọkapụta nsogbu. Ndị ụlọ ahịa ahụ nwere ike mgbe ahụ n'ezie nakwa a budata ibu ahụ olu nke ego ma na a nta mkpokọta uru. Ego iga ga-ukwu ọzọ dị oké ọnụ na ihe siri ike jikwaa. Ọbụna ugbu a, na ndọrọ ego nke ego na azụmahịa a na ọnwụ n'ihi na-ere ahịa. Ọ bụ n'ebe dị anya n'ebe niile na Mata. Onwe m na-eche na ego dị mma na ndị ọzọ bara uru karịa banknotes. Ma mgbe ahụ, a ga-enwe mkpụrụ ego nke ụka nile. Ọbụna ndị kasị elu.
Ọ na-adị mfe ịghọta na n'ọnọdụ a, ya mere, na-na ATMs. Ọzọkwa, eziokwu na-uttagsutomaterna ihe dị nnọọ na-adịghị mma n'ihi na ha na-achọ a kaadị iji, ma na-egbu-eme na ụlọ akụ. Business bụkwa yiri ka obere na obere yiri ka chọrọ iji ego. Ụfọdụ mmiri na-enye si 500 kronor n'elu counter site a mechiri emechi mma nche usoro. Ọ bụ ghọgbuo kwere na ndị a bịara n'ikperé mmiri ga-aga azụ nta ndetu ọzọ.
N'ezie ọ ga-ọbụna-ekwe omume obibi naanị 20 ndetu na mkpụrụ ego site ịzụ nri na a oge na ịzụta ọnụ ala ma ọ bụ na-eji uwe. Ma nnukwu nsogbu na-ebilite ga-esi jide nke ọtụtụ narị obere ego kwa ọnwa. Ị na-eche na anoghi n'ulo oba ga-enye ndị a. Ókè mberede ngwọta m chere banyere ya bụ iji "ịzụta" mkpụrụ ego na-apụta ịzụta ọnụ ala
variants nke oké mkpa. Ego bụ na nnukwu quantities dị ka fairgrounds. Olee otú arcades na ahịa na-na-na mkpụrụ ego? Olee otú ọ na-arụ ọrụ m na-amaghị ma ọ ga-abụ na-akpali ichoputa ọzọ.
Ọ bụ iji wepụ ya abụọ kasị ukwuu iche nke ego, ọ bụ eleghị anya na-agwụ na-anakọta ego fọdụrụ ego njikwa anoghi n'ulo oba na eleghị anya na-na ígwè ọrụ. Maka ndị chọrọ ịnọgide na-ahụ ego na-abịa ya mgbe ahụ mee ihe dị ukwuu na-eguzogide ka o kwere na ekpemekpe mwepụ now. Ozugbo ọ na-eme ọ na-fọrọ nke nta kpamkpam chụpụrụ maka ego.
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti kaadị akwụmụgwọ na ndị ọzọ modernities n'akụkọ ihe mere eme?
Ihe dị iche bụ na ala ike, ego ụlọ ọrụ na ụlọ ahịa na-eji nwayọọ nwayọọ na-ese na mmepe nke a kpam kpam cashless otu enweghị nhọrọ. Ọ bụ mgbe banyere na n'ikpeazụ dị ka otu kwesịrị nwere ikike a nhọrọ n'etiti kaadị akwụmụgwọ (na ndị ọzọ na-abụghị ego ihe) ma ọ bụ ego. The ntuli aka ka ruo n'ókè ụfọdụ na-anọgide bụ nanị n'ihi na a na-eguzogide development. Cars ndidi ngwa ngwa, sleeker, odi mfe, ihe adaba na dị ọnụ ala karịa site na afọ. N'ime oge ahụ, n'ihi na ndị mmadụ na-akpaghị aka zụtara ihe ụgbọala. Ma na okwu nke kaadị akwụmụgwọ, ọ bụ n'ụzọ dị ukwuu banyere a manyere coaxing na nnabata na gradual mmanye ka ndị mmadụ na-eji ha.
Otu ihe atụ nke eke akụkọ ihe mere eme na nkà na ụzụ bụ ụmụ mmadụ uru ma ọ bụ ọchịchọ ịmata ihe na-akpali n'ebe mbụ ókè. Ọ nwere ike na mbio Nkume Age ndị maka födosöket achọ ịchụ nta mgbakwasị ohere njem. Site na mmepe nke agha na ngwá agha bụ a eke, albeit ukwuu na-ezighị ezi onye. Ma mmepe nke kontantlösheten bụ enweghị obi na. Ọ bụ ma na-ekwekọghị n'okike
na-adịghị mma. Ọ bụ a rụrụ arụ development tumadi chụpụrụ site anyaukwu na n'ụzọ nke ike. A isi njehie na cashless arumaru na kontantlöshet gosiri dị ka a eke development. Onye na-eche na kontantlöshet bụ eke mmepe na ga-ejupụta ikekwe ọtụtụ narị afọ ime ihe ọjọọ. The usoro ike kama iji ya tụnyere a mutated na atrophied ụmụ anụmanụ dị ka usoro ndu nwere ike ma ọ bụ ga-adị ndụ n'ikpeazụ.
Ị nwere ike ịhọrọ na-eje ije, okirikiri, nọkwasi bọs ma ọ bụ na-aga site ụgbọ ala na-arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ụgbọ ala a dị ka ọha na eze na Olee ihe enyemaka otu narị afọ, a ka nwere ọtụtụ ndị na-achọ ihe na-enweghị a ụgbọ ala. Otu na-aga n'ihi na ekwentị, telivishọn, redio, na Internet, kọmputa na na. Na otu mgbe ahụ na-adịghị na-ezere si eji nke ìhè bulbs na electric Ighe n'ihi na ndị a bụ oké mkpa na eke development. Ma ọbụna na nke a, a ka nwere ohere iji kandụl na kerosin stoves dị ka onye ọzọ nke ndị chọrọ. Ọ ga-abụ uche na-adịghị na bara nnọọ omume rụrụ arụ na-amanye onye ọ bụla na-akwọ ụgbọala. Ma na okwu nke n'aka kaadị bụ ihe arị elu aghụghọ. Ọ dịghị ihe na-egosi na kontantlöshet bụ a ike na eke nkà na ụzụ.
Vecka 10, måndag 8 mars 2021 kl. 20:35